Ungasisebenzisa kanjani isikhathi sokubonisa noma kunini (Showtimeanytime.com/activate) - Ungakwenza Kanjani
Isikhathi sokubonisa noma kunini uhlelo lokusebenza lekhebula noma lesethelayithi, futhi nababhalisile bokusakaza bukhoma bangalusebenzisa ukusakaza iSikhawuti mahhala ekhaya noma kuphi.
I-Showtime Anytime ngokuyisisekelo isevisi enikeza ukufinyelela okusheshayo ezikhathini ezigcwele ezingenakho ukuhweba zemiklomelo ye-Showtime Original Series ewine imiklomelo, ama-movie ashisayo, ezemidlalo, ama-comedy specials, nokunye okuningi, futhi ngaphezu kwalokho ungabuka okwenzekayo njengamanje ku-Showtime. Buka noma nini nanoma kuphi lapho ufuna khona, kunoma iyiphi idivayisi esekelwayo ngenkathi use-U.S.
Isikhathi sokubonisa nganoma yisiphi isikhathi siyatholakala mahhala ngaphandle kwengxenye yokubhaliselwe kwakho kwe-Showtime okukhona.
Isikhathi sokubonisa nganoma yisiphi isikhathi singatholakala ngezigaba ezahlukahlukene laphaya. Yebo, uma unamalungu we-Showtime vele kumahhala ngokuphelele ukusiza ngobulungu be-Showtime. Ngakho-ke, azikho izindleko ezingeziwe ze-Showtime Anytime.
Isikhathi sokubonisa nganoma yisiphi isikhathi ngenye yezinsizakalo ezikhokhelwayo, ngakho-ke kufanele singene ukuze sisebenzise insiza kumagajethi ethu. Isikhathi sokubonisa noma kunini sitholakala kuhlolo futhi kuphela e-United States.Amaklayenti e-TV Box angenza kusebenze i-Showtime Anytime ngokuvakashela isayithi ku-Smart TV yabo. Inikeza amalungiselelo amaningi we-TV ahlukile.
Awudingi ukuzikhathaza uma ungenabo ubulungu nokho, i-Showtime Anytime inikezela ngesiqalo samahhala ngesikhathi sokubonisa nganoma isiphi isikhathi.com/activate.Sebenzisa kalula i-Showtime noma kunini bese uqala ukubuka ukuzijabulisa okungapheli. Uma usuvele unayo ukungena ngemvume komhlinzeki we-TV, mane umane ulandele izinyathelo ze-Showtime Anytime ukuze usebenze ngokushesha.
Izinyathelo Zokuqalisa Isikhathi Sokubonisa Noma kunini ku-Roku:
Inqubo yokwenza kusebenze isikhathi sokubonisa noma kunini ku-Roku -
Okokuqala, qiniseka ukuthi i-Roku yakho yenziwe yasebenza ngokuphelele.
Ngaleso sikhathi, hlola umhleli wakho wewebhu.
Okulandelayo, okudingeka ukwenze, iya ku-https: //www.roku.com/ connect yakho, ngena ngemvume irekhodi lakho, bese uya esitolo sesiteshi seRoku.
Ngemuva kwalokho, kuzofanele uye ku-showtimeanytime.com/actact by isiphequluli sewebhu.
Uma ukuleso sikhathi, mane uchofoze ku- 'faka isiteshi' bese wenza kusebenze isiteshi se-Showtime Anytime.
Vula i-Roku yakho uphinde uhlole isikrini se- 'Ekhaya'.
Ngemuva kwalokho, iya kuzilungiselelo> okunye okunye kohlaka> Ukuvuselelwa Kwesistimu> Hlola Manje.
Ngalesi sikhathi, iya esitolo sesiteshi bese uthola isiteshi se-Showtime Anytime.
Chofoza esiteshini esifakiwe.
Uyabona, okwamanje showtimeanytime.com/activate isiteshi siyatholakala kuhlu lwakho lwesiteshi seRoku.
Kufanele uthumele isiteshi se-Showtime Anytime ukuze ululame ikhodi yakho yesiteshi.
Iya kwikhompyutha yakho, thayipha isikhathi sokubonisa nganoma yisiphi isikhathi.com/activate.
Okwamanje chofoza enye indlela yokubhalisa yeRoku.
Faka ikhodi yakho ye-Showtime Anytime oyisebenzisayo.
Okwamanje Khetha inkinobho yokwengeza.
Ngemuva kwezikhathi ezimbalwa, i-Roku yakho izovuseleleka ngokwemvelo futhi usukulungele ukubukela i-showtimeanytime.com/activate.
Izinyathelo Zokuqalisa Isikhathi Sokubonisa noma kunini ku-Apple TV yakho:
Nazi izinyathelo zendlela yokusebenzisa i-Showtime Anytime ku-Apple TV:
Okokuqala, vula uhlelo lokusebenza lwe-Showtime ku-Apple TV yakho.
Manje, vula noma yiluphi uhlelo esiteshini se-Showtime bese ukhetha inkinobho yokudlala.
Manje, khetha umhlinzeki wakho we-TV ohlwini lwabahlinzeki.
Gcina engqondweni, Lapha, ungacelwa ukuthi ungene ngemvume ku-akhawunti yakho ye-Showtime ukuqinisekisa ukubhalisa kwakho.
Ngemuva kokukhethwa, ikhodi yokusebenza izoboniswa ku-Apple TV yakho. Ngakho-ke, bhala phansi.
Manje okudingeka ukwenze, vula i-www.showtimeanytime.com/activate kusiphequluli sewebhu kukhompyutha yakho, ithebhulethi, noma ifoni.
Okulandelayo, Uma ungangenanga ngemvume ngokuzenzakalela, chofoza inkinobho yokungena ngemvume bese usebenzisa igama lomsebenzisi nephasiwedi enikezwe umhlinzeki wesevisi ukungena ku-akhawunti yakho.
Manje udinga ukufaka ikhodi yakho yokusebenzisa ebhokisini lekhodi yokuvula engenalutho.
Futhi uma ikhodi yokuvula evela ku-Apple TV yakho iqinisekisiwe, kuzovela umlayezo esikrinini.
Manje, ungaqala ukubuka uchungechunge lwe-Showtime oluthandayo nama-movie we-Showtime nge-Showtime Anytime ku-Apple TV yakho.
Izinyathelo Zokuqalisa Isikhathi Sokubonisa Noma Kunini ku-Xbox One yakho:
Isikhathi sokubonisa sibuye sehla ku-Xbox One. Nazi izinyathelo zendlela yokwenza kusebenze i-Showtime Anytime ku-Xbox One futhi ubuke ukufinyelela okungenamkhawulo emibonisweni nakuma-movie we-Showtime noma kunini lapho ufuna khona:
Vula uhlelo lokusebenza lwe-Showtime ku-Xbox One yakho.
Okulandelayo, zama Ukudlala noma yiluphi uhlelo esiteshini se-Showtime Anytime.
Manje, khetha umhlinzeki wakho we-TV ohlwini.
Ngemuva kokukhetha umhlinzeki, kuzokhonjiswa ikhodi yokuvula kusikrini sakho se-Xbox One. Yiphawule phansi.
Manje, vula i-www.showtimeanytime.com/activate kusiphequluli sewebhu kukhompyutha yakho, ithebhulethi, noma i-smartphone.
Isinyathelo esilandelayo, chofoza ku-LOGIN inkinobho bese usebenzisa igama lomsebenzisi nephasiwedi enikezwe umhlinzeki wesevisi ukungena ku-akhawunti yakho.
Vele ulandele imiyalo bese ufaka ikhodi yokwenza ku-PIN ibhokisi lokuvula elingenalutho.
Manje uma ikhodi yokwenza kusebenze kusuka ku-Xbox One yakho iqinisekisiwe, kuzovela umlayezo esikrinini sakho.
Manje, ungaqala ukubuka uchungechunge lwama-movie wakho we-Showtime owathandayo nama-movie nge-Showtime Anytime ku-Xbox One yakho noma kunini noma kuphi lapho ufuna khona.
Izinyathelo Zokuqalisa Isikhathi Sokubonisa Noma kunini ku-Samsung Smart TV yakho:
Inqubo yokwenza kusebenze i-Showtime Anytime ku-Samsung Smart TV kulula kakhulu futhi iyafana nokusebenza kwe-ShowTime Anytime ku-Apple TV. Nazi izinyathelo zokwenza kanjalo:
Okokuqala, vula uhlelo lokusebenza lwe-Showtime ku-Samsung Smart TV yakho bese uzama Ukudlala noma yiluphi uhlelo esiteshini se-Showtime Anytime.
Okulandelayo, khetha umhlinzeki we-TV noma umhlinzeki wesevisi yokusakaza ohlwini.
Ngemuva kokuthi usuqedile ukukhetha umhlinzeki, ikhodi yokusebenza izoboniswa kusikrini sakho se-Samsung Smart TV.
Manje udinga ukuvakashela i-http: //www.showtimeanytime.com/activate kusiphequluli sewebhu kwi-PC yakho, ithebhulethi noma i-smartphone.
Uma kwenzeka ungangenanga ngemvume ngokuzenzakalela, chofoza ku-LOGIN inketho, bese ungasebenzisa igama lomsebenzisi nephasiwedi enikezwe umhlinzeki wesevisi ukungena ku-akhawunti yakho.
Landela imiyalo esesibukweni bese ufaka ikhodi yokusebenzisa ebhokisini lekhodi yokuvula engenalutho.
Ngemuva kokuthi ikhodi yokuvula iqinisekisiwe, kuzovela umlayezo kusikrini se-TV.
Lapho usuzenze zonke izinyathelo ngempumelelo, i-Showtime Anytime izocushwa ku-Samsung Smart TV futhi ungaqala ukubuka noma yini oyithandayo.
Izinyathelo Zokuqalisa Isikhathi Sokubonisa Noma kunini ku-Android TV yakho:
Nazi izinyathelo zokuqalisa i-Showtime Anytime ku-Android TV yakho:
Okokuqala, iya ku-Google Play Isitolo ku-Android TV yakho bese umane ulande uhlelo lokusebenza lwe-Showtime.
Isinyathelo esilandelayo ukuvula uhlelo lokusebenza lwe-Showtime ku-Android TV yakho bese uzama ukudlala noma yimuphi umbukiso noma i-movie esiteshini se-Showtime Anytime.
Ngemuva kwalokho, khetha umhlinzeki wakho we-TV noma wokusakaza ohlwini.
Uma usuqedile ukukhetha umhlinzeki, ikhodi yokusebenza izoboniswa kusikrini sakho se-Android TV.
Manje konke okudingeka ukwenze ukuya ku-www.showtimeanytime.com/activate kusiphequluli sewebhu kwi-PC yakho, ithebhulethi, noma i-smartphone.
Into elandelayo ukuthi, chofoza ku-LOGIN inketho bese usebenzisa igama lomsebenzisi nephasiwedi enikezwe umhlinzeki wesevisi ukungena ku-akhawunti yakho.
Manje, landela imiyalo esesibukweni bese ufaka ikhodi yokusebenzisa ebhokisini lekhodi lokuvula elingenalutho.
Uma ikhodi yokuvula isiqinisekisiwe, umyalezo ophumelelayo uzovela kusikrini se-TV.
Manje, ungaqala ukubuka noma yini oyifunayo ku-Showtime ku-Android TV yakho.
Jabulela i-Showtime Anytime kuma-Platform ahlukile:
Ungayisebenzisa kalula kumagajethi afaka i-Amazon Fire TV, i-Apple TV, i-Android TV, i-Chromecast, i-LG TV, iRoku, i-Samsung TV, i-Xbox One, nokunye okuningi. Ngakho-ke, noma ngabe usebenzisa yiphi igajethi ukubukela izithombe ezinyakazayo nethelevishini, i-Showtime Anytime ingasetshenziswa kaningi ngaphandle kwezinkinga.
Isikhathi sokubonisa noma kunini yinhlangano eyenza umtapo wayo wezindaba ube mkhulu kakhulu. Ungathola izithombe ezinyakazayo ezingenakubalwa, ukuvela kwe-TV, imibukiso ye-stand-up, nokunye okuningi kulo mhlinzeki wesevisi. Futhi, into elula kakhulu nge-Showtime Anytime ukuthi lezi zinto zingafinyeleleka ezinhlosweni eziphezulu. Lokhu kuvame ukubaluleka kakhulu njengoba uzosebenzisa lolu hlelo lokusebenza kunoma yimaphi amagajethi akho ngaphandle kokucindezela ngokujwayelekile. Ngaphezu kwalokho, ukusebenzisa lolu hlelo lokusebenza ukugxuma kulula ngokweqiniso ngenxa ye-UI yaleli sayithi. Le UI yenza okokusebenza kubukeke njengosuku lwanamuhla futhi bushelelezi ngenkathi ilula ngendlela emangalisayo.
Izinsizakalo ze-Showtime Anytime ziyatholakala ku:
I-SHO.com (i-webhusayithi yabo esemthethweni) iwebhusayithi esemthethweni)
Njengoba le sevisi okwamanje itholakala e-US kuphela. Abasebenzisi bayo kufanele bakhumbule ukuthi amasayithi neziteshi zinganezela kuphela izwekazi nezindawo ezizungezile kuphela.
Njengamanje, naba abahlinzeki beziteshi abalandelayo abane-Showtime Anytime abavela emndenini we-Showtime -
Ikhebula Lesixwayiso Sesikhathi
Izici ze-Showtime Anytime:
Ungabuka okwenzeka bukhoma kuzo zombili, kungaba yi-Showtime East ne-Showtime West, futhi futhi ungashintsha phakathi kweziteshi ngokuya ngemfuneko yakho.
Kukusiza ngokuhlunga uphinde ubone amaphrojekthi wakho owathandayo ku-Showtime Anytime.
Ungalanda kalula amafilimu nezigcawu kumagajethi wakho we-Smart TV Box bese uwabuka ngokuhamba kwesikhathi lapho ungaxhunyiwe ku-inthanethi.
Ungaphinda ubuke umbukiso futhi lapho ugcine khona kwenye igajethi.
Ungayisebenzisa ukuwabuka kugajethi yakho oyikhethayo njengeThebhulethi yakho, Ucingo, i-TV, noma kwi-PC yakho.
Sibhale indlela yokwenza kusebenze i-Showtime Anytime ngenhla. Siyethemba lo mhlahlandlela onemininingwane nesinyathelo ngesinyathelo wokuthi ungasisebenzisa kanjani isikhathi se-Showtime noma kunini kumadivayisi akho usebenzisa i-Showtime anytime.com/activate kukusize ngokukuvumela ukuthi usebenzise i-Showtime Anytime ku-smartphone yakho.
Bukela i-TV Shows Online